sesamol （533-31-3） Warshadaha soo-saaraha soosaaraha
Sesamol waa shey dabiici ah oo dabiici ah, lignan, oo laga soo saaray sisinta (sisinta) iyo sisinta; iyo celceliska maadada sisinta ee sisinta ayaa ah tan ugu sarreysa, waa shey cad oo adag, Waa ifafaale ifafaaleed. Waxay waxyar ka buuqaysaa biyaha, laakiin waxay si khaldan ugu saliida badantahay ..
Sesamol budo Macluumaadka Saldhiga
magaca Budada Sesamol
Mass molar 138.12 g / mol
Melt Point 62 ilaa 65 ° C (144 ilaa 149 ° F; 335 ilaa 338 K)
Formula kelli C7H6O3
dhibic kulayl 21 illaa 127 ° C (250 ilaa 261 ° F; 394 ilaa 400 K) saacadaha 5
dhoola mmHgO1c2ccc (O) cc2OC1
Sesamol waa maaddo dabiici ah oo laga helo saliida sisinta iyo sisinta la dubay. Sesamol (CAS 533-31-3) waxaa loo tixgeliyaa inay tahay qaybta ugu weyn ee firfircoon kana xoog badan saliidda sisinta oo door ka ciyaareysa saameynteeda daaweynta.
Sisinta (Sesamum indicum) waa saliid muhiim u ah qoyska Pedaliaceae. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah saliidda ugu da'da weyn ee loo yaqaan oo uu u adeegsado bini-aadamka qiimaha nafaqada oo keliya laakiin sidoo kale qiimaha daawada. Qaybaha ugu waaweyn ee sisinta bixisa qiimaha daweynta waa caleemaha iyo saliidda abuurka.
Isku-darka Sesamol 533-31-3 waxaa laga helaa qaddar raad ah marka lagu daro xeryahooda kale ee lignin ee saliidda sisinta, sesamin iyo sesamolin. Dhismahan biyaha ku milma ayaa loo arkaa inuu yahay antioxidant xoog leh.
Sidee sesamol work?
Sesamol waxay u shaqeysaa siyaabo kala duwan si ay u bixiso faa iidooyinkeeda daaweyn ee baaxada leh sida neuroprotection, antioxidant saamaynta, anti-bararka, anti-buro, anti-shucaaca iyo saamaynta xagjirnimada xagjirka ah.
Hoos waxaa ku yaal habab ay sesamol u shaqeyso si loo gaaro saameynta la sheegay;
I. Waxay ka hortagtaa waxyeelada DNA-da by diiqadda oksidheer
Sesamol waxay hor istaagi kartaa waxyeelada DNA-ga ee walaaca shucaaca keena. Shucaaca 'onizing radiation' wuxuu waxyeelo u geystaa DNA-ga gacanta isagoo ku kicinaya abuurka koromosoomyada iyo micronuclei unugyada sii kordhaya.
II. Waxay kicineysaa waxqabadka antioxidants muhiim ah
Sesamol wuu shaqeeyaa adoo hagaajinaya waxqabadyada enzymes-ka antioxidant-ka muhiimka ah sida catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), iyo glutathione peroxidase (GPx), oo ay weheliso heerar korodhay oo ah glutathione (GSH) oo yaraaday. Enzymes-kan ayaa door muhiim ah ka ciyaara ka hortagga waxyeelada unugyada ee xagjirnimada.
III. Waxay joojisaa borotiinka pro-apoptotic-ka sidaas awgeed waxay sare u qaadaa jiritaanka unugyada
Borotiinada pro-apoptotic-ka waa borotiinno dhiirrigeliya dhimashada unugyada. Waxaa ka mid ah p53, caspase-3, PARP, iyo Bad enzymes. Enzymes-kan ayaa ku lug leh geerida unugyada barnaamijka oo markaa laga yaabo inay yareyso jiritaanka unugyada.
Sesamol waxaa loo muujiyey inuu kor u qaado jiritaanka unugyada iyadoo la joojinayo waxqabadka enzymes-ka pro-apoptotic-ka.
IV. Ka-hortagga peroxidation-ka xaydha
Laydhka peroxidation-ka waa nooc ka mid ah hoos u dhaca ku yimaadda dufanka sababa oksaydh awgood. Tani waxay keenaysaa sameynta aldehydes falcelin leh, sida malondialdehyde (MDA) iyo 4-hydroxynonenal (HNE) oo sababa dhaawaca unugyada. Sesamol waxaa loo muujiyey inay ka hortagto lipid peroxidation-ka sidaas awgeed waxay difaac u tahay unugyada.
V. Waxay joojisaa jiilka xagjirnimada bilaashka ah oo ay ku jiraan xagjirnimada hydroxyl
Xagjirnimada bilaashka ahi waa xeryahooda aan xasillooneyn ee la xiriira cudurada iyo gabowga. Hydroxyl radicals waa oksaydhka ugu awooda badan ee keena jirro.
Sesamol wuxuu yareeyaa jiilka xagjirnimada bilaashka ah oo ay kujiraan hydroxyl, α, α-diphenyl-β-picrylhydrazyl (DPPH), iyo ABTS (2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) xagjir.
VI. Waxay kobcisaa waxqabadka miisaanka xagjirnimada ah
Marka lagu daro ka hortagga jiilka xagjirnimada xorta ah, sesamol wuxuu awood u leeyahay inuu baabi'iyo xagjirnimada bilaashka ah sida hydroxyl, lipid peroxyl iyo tryptophanyl radicals.
VII. Xakamaynta unugyada caabuqa
Sesamol waxay xakameysaa wadiiqooyinka istiraatiijiga ah ee ku lug leh soo saarista noocyada falcelinta ah sidaas darteed waxay yareysaa jawaabta caabuqa.
VIII. Waxay yareysaa cytokines inflammatory (TNFα, IL-1β, iyo IL-6)
Nitric oxide, oo ay soo saarto iNOS, waxay u horseeddaa caabuq sambabada iyada oo kicinaysa cytokines inflammatory, sida TNFα, iyo kor u qaadida jawaabta caabuqa. Sesamol waxay awood u leedahay inay joojiso sii deynta TNFα iyo IL-1β.
IX. Qabashada koritaanka unugyada wejiyo kala duwan
Sesamol waxaa loo muujiyey inay keento qabashada koritaanka unugyada wejiyada koritaanka unugyada kala duwan oo ay ku jiraan wajiga S iyo wajiga G0 / G1. Waxyaabaha Sesamol ee kansarka ka hortagga ayaa sidaas awgeed ka caawiya, tusaale ahaan, yareynta koritaanka unugyada kansarka.
X. Ku shaqeynta dariiqa loo yaqaan 'caspase pathway'
Qasabadaha ayaa ah enzymes ku lug leh dhimashada unugyada barnaamijka. Sesamol waxaa loo muujiyey inay dhaqaajiso dariiqyadan taas oo keeneysa dhimashada unugyada kansarka.
XI. Ku kicinta apoptosis iyada oo loo marayo dariiqyada gaarka ah iyo kuwa shisheeyaha ah
Apoptosis waa geedi socod jir ahaaneed kaas oo dhimashada unugyada abaabulan ay ku dhacaan. Waa geedi socod lama huraan ah maadaama ay ka caawiso jirka inuu baabi’iyo unugyada dhintay.
Sesamol wuxuu kudhalaa apoptosis laba siyaabood oo kala duwan, qaababka caadiga ah iyo kuwa ka baxsan.
XII. Hinders mitophondrial autophagy
Autochagy mitochondrial waa nooc gaar ah oo nabaad-guur ah oo ka caawiya ka takhalusida mitochondria cilladaysan.
Marka sesamol uu joojiyo hawshan, markaa apoptosis ayaa la kiciyaa.
XIII. Waxay yareysaa heerarka nitrite iyo neutrophil
Nitrites iyo neutrophils waxay door ka ciyaaraan jawaab celinta caabuqa. Waxay ku lug leeyihiin sii deynta nitric oxide oo dhexdhexaadinaysa jawaab celinta caabuqa iyada oo la soo saaro ama haddii kale la xakameeyo caabuqa.
Sesamol wuxuu door ka ciyaaraa sida wakiilka anti-bararka iyadoo la yareeyo heerarka nitrites iyo neutrophils.
Waa maxay sesamol loo isticmaali jiray?
Sesamol waxaa loo isticmaalaa faa'iidooyin caafimaad oo kala duwan oo ay ka mid yihiin;
aniga. Dhiig kar.
Saliidda sisinta waxaa loo isticmaalaa dawooyin dhiig kar ah oo yar sida daawo la xaqiijiyay si loo yareeyo cadaadiska dhiigga.
Baadhitaan ballaadhan oo ku saabsan saliidda sisinta ayaa soo jeedinaysa in sisamol iyo sisin (lignans laga heli karo saliidda sisinta) ay door weyn ka ciyaaraan nidaaminta cadaadiska dhiigga. Qaadashada saliidda sisinta, si aad u karis badan leh, muddo seddex isbuuc ah waxay hoos u dhigeysaa cadaadiska dhiigga ee dadka qaba dhiig karka si caadi ah.
Intii lagu gudajiray cilmibaarista, dhakhaatiirta caafimaadka waxay lakulmeen koox bukaan ah oo dhiig kar ah daawo (Procardia, Nefedica iyo Adelta) mudo 21 maalmood ah. In kasta oo xoogaa hoos u dhac ku yimid cadaadiska dhiiggooda, haddana caadi ma ahayn. Saliida sisinta waxaa loo isticmaalay badal ahaan daawooyinka, bukaanada la baaray isla mudadaas kadib. Natiijadu waxay noqotay in cadaadiska dhiiggooda uu caadi ku dhacay.
Dhakhaatiirtu waxay ku doodeen in natiijadan ay si aad ah uga qayb qaadatay xaddi badan oo sisamol iyo sisin ah oo ku jira saliidda sisinta la kariyey. Haddii sidaas la ogaaday oo ay ku jirto saliidda sisinta ee cuntada loogu talo galay dadka dhiig karka qaba ay ka waxtar badan tahay daawada la siinayo.
Natiijooyinkan waxaa lagu wargaliyay Ururka Wadnaha ee Mareykanka intii lagu gudajiray shirkii sanadlaha ahaa ee Jaaliyadda-Dhiirrigelinta ee Ameerikaanka ah oo uu soo diyaariyey Professor Devarajan Sankar oo ka tirsan Jaamacadda Annamalai, India.
ii. Xannibaadda mindhicirka.
Cilmi baaris ku saabsan saameynta sesamol ee xiidmaha mindhicirka ayaa soo jeedinaysa inay aad uga fiicnaan karto aspirin. Daraasad ku saabsan ulcerative colitis, IBD (xannuun mindhicir barar), taas oo u keenta dhaawac unugyada xuubka iyada oo loo marayo nidaaminta nidaamka bararka. Daraasad ku lug leh jiirka, sesamol ayaa lagu ogaadey inay yareyneyso howlaha enzymes-ka keena caabuqa.
In kastoo asbiriin lagu yaqaan inuu si wax ku ool ah u dilo cilladaha caabuqa markii la cuno, waxay u horseedi kartaa horumarka boogaha ee isticmaalka muddada-dheer. Aspirin wuxuu sababa dhaawacyada gastroduedonal isagoo daaya unugyada.
Daraasad dheeri ah ayaa muujineysa in daawada nasogastric ee sesamol ee bukaanada la ildaran mindhicirka oo yar ay weheliso daryeelka caadiga ah ay hoos u dhigeyso fursadaha qaliinka lagu sameynayo
iii. Wadne xanuun.
Cunsurrada halista ee loo aaneeyo cudurrada wadnaha iyo xididdada ayaa qayb weyn ku leh dhimashada iyo cudurrada adduunka. Waxay u horseedi karaan cadaadiska oksidheer iyo haddii aan la daaweyn ay ka sii darto kordhinta wax soo saarka pf noocyada oksijiinta, oo ay ku jiraan nidaamka difaaca antioxidant qalloocan.
Sesamol waxay isticmaashaa astaamaheeda anti-oksidheer si looga hortago cudurada halista atherosclectoric cudurada wadnaha sababaha sida hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, uruurinta sare ee kolestaroolka lipoprotein-ka hooseeya iyo cufnaanta hoose ee lipoprotein.
Baadhitaanno dheeri ah ayaa lagu soo gabagabeeyey in sesamol uu leeyahay xasilloonida xuubka iyo saamaynta yareynta dufanka. Intaa waxaa sii dheer, waxay siisaa difaac myocardium-ka ka hortagga wadnaha ee loo yaqaan 'Cardioyopathy'.
IV. Koritaanka ilmaha.
Sesamol waxaa loo isticmaalaa noocyo badan oo horumarinta ilmaha ah. Daraasado kaladuwan, sesamol loo adeegsaday yareynta ADHD ee carruurta dhimirka ka jirran waxaa loogu yeeray waxtar yar haddii loo isticmaalo qaddar yar. Yaraanshaha DHA ayaa aad ugu badan carruurta qaba ADHD.
In ka badan toban cilmi baaris ayaa tilmaamaya faa'iidooyinka wanaagsan ee astaamaha ADHA oo ay ku jiraan akhrinta ereyga, dareen la'aanta, barashada muuqaalka, xusuusta shaqada, iyo feejignaanta.
Dhallaanka lagu duugay saliidda sisinta muddo afar toddobaad ah waxay diiwaangeliyeen koritaanka iyo firfircoonaanta jirka.
Sesamol waxay u shaqeysaa si wax ku ool ah sida kaabista daawada sonkorowga si loo yareeyo heerarka sonkorta dhiigga si deg deg ah. Qaadashada nafaqada sesamol ama bedelida cuntada saliidda sisinta inta lagu jiro daawooyinka sonkorowga waxay siisaa wax soo saar wanaagsan oo shaqada ah.
Daraasado dhowr ah, inta badan ku lug leh bukaanka nooca 2aad ee sonkorowga, sesamol waxay soo bandhigeen natiijooyin aad u wanaagsan. Mid ka mid ah daraasadaha ayaa ku lug lahaa seddex kooxood, oo mid waliba la xanuunsan yahay nooca sonkorowga 2. Mid ka mid ah kooxdu waxay ku dhacday sesamol oo keli ah, koox kalena waxay qaadataa dawada maalinlaha ah ee glibenclamide (Glyburide), iyo tii ugu dambaysay labadaba sesamol iyo Glyburide muddo ku dhow 7 toddobaad.
Sesamol waxaa lagu soo warramey inuu saameyn ku yeesho glyburide, maadaama daaweynta isku dhafan ay hoos u dhigtay hemoglobin A1c iyo heerarka sonkorta dhiigga si aad ah, aadna uga fiican mid ka mid ah daaweynta keliya.
Hyperlipidemia. Baarayaasha ayaa soo sheegay in maadada loo yaqaan ‘Sisamol’ ee loo isticmaalo gubista kolestaroolka iyo waxyaabaha kale ee dhiigga ku jira ay siisay natiijooyin wanaagsan. Imtixaan muunad ah, waxtarka sesamol waxaa lagu tijaabiyey cunno dufan badan oo ay keento hyperlipidemia, hyperlipidemia daba dheeraatay, hypercholesterolemia, iyo hyperlipidemia daran.
Hoos udhaca heerarka triacylglycerol maadaama natiijooyinka dhamaadka ay soo jeediyeen in sesamol ay si weyn u yareyneyso nuugista triacylglycerol. Sesamol sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu beddelo heerarka kolestaroolka ee sarreeya.
Daraasaduhu waxay soo jeedinayaan in dheecaanka loo yaqaan 'sesamol supplement' uu kordhiyo ka-bixitaanka kolestaroolka iyo sidoo kale inuu yareeyo nuugistiisa.
VI. Cudurka dheef-shiid kiimikaadka iyo buurnida
Sesamol waxaa lagu soo waramayaa inay ka kooban tahay awoodo bayooloji oo kala duwan oo ay ka mid tahay awooda dib u celinta buurnida iyo cilladaha dheef-shiid kiimikaadka. Waxaa loo soo sheegay inay suurtagal tahay in la joojiyo waxyeelada buurnida.
Cilmi baaris la sameeyay si loo tijaabiyo sida sesamol ay waxtar ugu leedahay buurnida, waxaa la ogaaday inay habeyn karto dheef-shiid kiimikaadka cagaarshowga. Tani waxay markii dambe hagaajisay iska caabbinta insulin waxayna kordhisay miisaanka oo yaraada. Cayilka xad dhaafka ah iyo cilladaha dheef-shiid kiimikaadka ee la xiriira waxay si ballaaran ula xiriiraan isu-ururinta dufanka jirka. Isu soo uruurinta oo yaraatay macnaheedu waa isbedelka buurnida.
Isticmaalka Sesamol waxay kordhisaa lipolysis, qiijiinka asiidhka dufanka leh iyo hoos u dhaca heerka lipogenesis cagaarshowga, arrimaha muhiimka u ah hoos u dhigista isku ururinta dufanka. Dhaqdhaqaaqyadan (sida qaadashada dufanka, isku-darka iyo catabolism) waxay ka mid yihiin kuwa badan oo ka dhaca beerka.
Dadka isticmaala sesamol waxay ka warbixiyeen astaamaha cagaarshowga iyo dhiigga ee dhiigga ka wanaagsan, iyo sidoo kale in la hagaajiyo xasaasiyadda insulin-ta.
vii. Rheumatoid arthritis, osteoarthritis, iyo lafo xanuun.
In kasta oo rheumatoid arthritis, xanuun xanuun daran oo joogto ah, uu leeyahay daaweyn badan oo kiimikaad ah, isticmaalka muddada dheer badanaa waa hepatotoxic. Sesamol waxay noqon kartaa daawo dabiici ah oo macquul ah. Daraasado lagu baarayay isla isla waxay soo sheegeen in sesamol uu leeyahay saameyn kahortagga arthritic iyo anti-bararka oo si wax ku ool ah u hagaajiya saameynta rheumatoid arthritis.
Cudurka Osteoarthritis waa cunsur weyn oo wax ku biiriya xanuunka wadajirka ah, oo lagu qiyaaso inuu saameynayo qiyaastii 15% dadweynaha adduunka. Si kastaba ha noqotee, cadaadiska Oxidative, si kastaba ha ahaatee, wuxuu qayb weyn ku leeyahay cillad la'aanta muruqyada lafaha. Cilmi-baaris ku saabsan saameynta sesamol ee xanuunka lafa-beelka la xiriira osteoarthritis ayaa muujisay in qaadashada dheecaanka 'sesamol' muddo toddobaad ah ay yareyn karto xanuunka. Tan waxaa loo aaneynayaa hantida ka hortagga oksida ee sesamol.
Saynisyahannadu waxay soo gabagabeeyeen in geeddi-socod la mid ah kan loo yaqaan 'postmenopausal osteoporosis' ay hoos u dhacday si ay u keento 'ovariectomy', halkaas oo ay ku sii lumayaan miisaanka lafaha iyo xoogga. Sidaa darteed waxaa la ogaaday in lafaha lumay ay si weyn ugu tiirsan tahay estrogen. Sesamol waxaa lagu soo waramayaa inuu ku xidhan yahay qaboojiyeyaasha estrogen isla markaana soo bandhigo hiddo-wadaha hiddo-wadaha ee jawaab-celinta estrogen-ka. Saamaynta waxtarka leh waxay sare u qaaddaa awoodda lafaha iyadoo soo saareysa borotiinno ku jira sheyga jajabka
viii. Cudurka Alzheimer, walaaca iyo istaroogga.
Cudurka Alzheimers waa cillad maskaxeed oo horumarsan oo loo aaneeyo unugyada maskaxda oo xumaada. Waxay caadi ahaan cirib tirtaa madax-bannaanida maskaxda ee dadka ay dhibaatadu saameysey. Dhibaatooyinka neerfaha ee sesamol ayaa lagu soo warramey inay rajo leeyihiin. Daraasad ayaa loo dejiyay si loo caddeeyo awoodda daaweynta ee sesamol ee suuxdinta, xaalad si ballaaran ugu xiran cillad garasho iyo cadaadiska oksida. Cilmi-baarista ayaa lagu soo gabagabeeyay in sesamol ay saameyn ku yeelatay saameynta ka-hortagga istaroogga, cillad garashada, suuxdinta, iyo walbahaarka oksida. Isticmaalka Sesamol ee daawada suuxdinta ayaa faa'iido leh.
[a]. Sesamol Anti-oksaydh saamaynta
Cadaadiska Oxidative wuxuu dhacaa marka ay jirto isku dheelitir la'aan soosaarka xagjirnimada bilaashka ah iyo antioxidants ee jirka. Tani waxay badanaa keentaa dhaawaca unugyada iyo diiqadda oksida ee loo tixgeliyo inay yihiin asalka sababaha cuduro badan.
Cadaadiska Oxidative si kastaba ha noqotee waa geedi socod jireed oo dabiici ah oo waliba u horseeda gabow.
Antioxidants dhinaca kale waa walxo ka hortaga waxyeelada unugyada sababtoo ah xagjirnimada bilaashka ah. Waxaa badanaa loogu yeeraa xoqeyaasha xagjirka xorta ah.
Sesamol waa qeybta ugu awooda badan uguna xoogan ee antioxidant ee saliida sisinta. Waxay ku shaqeysaa habab kala duwan si loo gaarsiiyo saameynta antioxidant. Farsamooyinkaan ficil ahaaneed waxaa ka mid ah hagaajinta howlaha muhiimka ah ee antioxidant-ka, ka ilaalinta DNA-da waxyeelada shucaaca, kala-qaadista xag-jiryada xorta ah, ka-hortagga lipid peroxidation-ka, iyo ka ilaalinta shucaaca ultraviolet.
Daraasad lagu qiimeynayo waxqabadka shucaaca ee sesamol ee ka dhanka ah shucaaca gamma ee DNA. Waxyeellada DNA-da waxaa sababa iyadoo la soo bandhigayo hal-ama laba-jibbaar jab ah iyada oo loo marayo jiilka noocyada oksijiinta ee falcelinta leh.
Sesamol waxaa laga helay inuu xakameynayo kala-goynta hal-xiraalaha DNA. Waxay sidoo kale hoos u dhigtay heerarka xagjirnimada bilaashka ah gaar ahaan hydroxyl, DPPH, iyo ABTS xagjirnimada, kuwaas oo dhammaantood ku xirnaa soo-gelitaannada hal-ama-laba-laaban ee la keenay.
[b]. Sesamol Anti-barar faa'iidooyinka
Caabuqu waa geedi socod dabiici ah oo jidh ahaaneed oo jidhku shaqaaleeyo si loola dagaallamo wakiilada ajaanibta ah sida bakteeriyada, fungi, ama xitaa dhaawac. Si kastaba ha noqotee, caabuq daba dheeraada ayaa waxyeello u leh jirka maadaama uu u horseedo cilado kala duwan.
Wakiilada anti-bararka waxay ka caawiyaan jirka inay ka ilaaliyaan waxyeellada iyagoo la dagaallamaya caabuqa. Sesamol waxay ku shaqeysaa siyaabo kala duwan oo ay ku bixiso saamaynta anti-bararka. Hababka noocan ah waxaa ka mid ah ka hortagga unugyada caabuqa, yareynta wax soo saarka nitrites iyo sidoo kale xakameynta waxqabadka iyo dariiqyada caabuqa.
Daraasad lagu sameeyay jiirka leh dhaawaca sanbabada ee lipopolysaccharide LPS, sesamol ayaa lagu ogaadey inuu xakameynayo cytokines anti-inflammatory iyo sidoo kale inuu caqabad ku yahay soo saarista nitric oxide iyo prostaglandin E2 (PGE2). Sesamol waxaa sidoo kale lagu ogaadey inuu kor uqaadayo adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK). Tani waxay gacan ka geysaneysaa xakameynta bararka iyo sidoo kale yareynta dhaawaca unugyada.
[c]. Kansarka ka hortaga Sesamol saamaynta
Sesamol waxay leedahay hanti ka caawisa la dagaalanka unugyada kansarka oo ay ku jiraan waxqabadka ka hortagga faafinta iyada oo loo marayo habab kala duwan sida ka hortagga awooda xuubka, qabashada koritaanka unugyada ee heerar kala duwan iyo sidoo kale soo kicinta apoptosis.
Daraasad ku lug leh khadka unugyada kansarka mindhicirka ee 'DLD-1', sesamol waxaa loo isticmaalay qiyaasta 12.5-100 μM. Waxaa la ogaaday in waxqabadka transcriptal ee COX-2 uu hoos u dhacay 50%.
Daraasad kale, sesamol oo loo adeegsaday qadar sare oo ah 0.5-10 mM ayaa lagu ogaadey inay keento apoptosis-ka HCT116 iyadoo la kordhinayo oksijiin ka hortagga uurka (O2 • -) oo ah qaab qaadasho ku tiirsan. Tani waxay horseeday in la hawlgeliyo JNK wadiiqadda calaamadaha oo dhiirrigelisa dhaawaca mitochondrial. Tanina waxay keeneysaa sii deynta cytochrome c oo ugu dambeyntii kicisa caspase sidaasna ku dhalisa apoptosis.
[d]. Seasomol Anti-mutagenic saamaynta
Mutagenicity waxaa loola jeedaa awooda wakiilka (mutagen) ee sababi kara isbeddellada. Is-beddelidda oo ah isbeddel ku dhaca walxaha hidda-socodka waxay u horseedi kartaa dhaawac unugyada waxaana loo tixgeliyaa inay sababi karto cudurro gaar ah sida kansarka.
Sesamol waxaa lagu muujiyey inay leedahay hanti xoog leh oo looga hortago mutagenic. Faa'iidooyinkeeda anti-mutagenic waxaa loo aaneeyaa waxqabadka antioxidant iyo in ka badan sidaa darteed awoodda lagu cabudhiyo xagjirnimada xorta ah.
Daraasad ahaan, mutagenicity-ka waxaa dhaliyey jiilka oxygen radicals by tert-butylhydroperoxide (t-BOOH) ama hydrogen peroxide (H2O2). Sesamol waxaa lagu ogaadey inuu sameeyo saameyn xoogan oo anti-mutagenic ah noocyada tijaabiyaha Ames ee TA100 iyo TA102. Culeyska TA102 waxaa loo yaqaanaa inuu aad ugu nugul yahay noocyada oksijiinta falcelinta leh. Sesamol waxaa sidoo kale la muujiyey inuu xakameynayo mutagenicity-ka sodium azide (Na-azide) ee tijaabada tijaabada TA100.
[e]. Sesamol Ilaalinta shucaaca
Shucaac waxaa loola jeedaa tamarta ku socota qaab mowjado ama walxo ah. Shucaac ayaa si aad ah uga dhici kara deegaankeena. Si kastaba ha noqotee, shucaaca ionizing wuxuu noqon karaa mid waxyeello leh haddii aan la xakamayn. Soo-gaadhista shucaaca oo gaaban waxay u horseedi kartaa cudurro ba'an sida shucaaca jirro iyo qorax-gubasho.
Soo-gaadhista dheeraadka ah ee shucaaca waxay keentaa cilado aad u daran oo ay ka mid yihiin kansarka iyo cudurrada wadnaha iyo xididdada.
Daraasad ku saabsan jiirka jiirka oo leh shucaaca DNA-da ee shucaaca ku dhaca, sesamol ayaa lagu qiimeeyay waxqabadkeeda kahortaga shucaaca. Daaweynta jiirarka sesamol waxay dhalisay in laga ilaaliyo waxyeelada DNA ee shucaaca ku dhaca.
[f]. Ka ilaalinta wadnaha
Sesamol ayaa lagu soo warramey inay wadnaha ka difaacdo dhaawacyada.
Daraasad lagu qiimeynaayo awoodda ka hortagga ee sesamol ee dhaawaca myocardial, daaweynta sesamol waxaa laga qaatay (50 mg / kg) waxaa la qabtay 7 maalmood kahor muddada qalliinka.
Daraasadani waxay ogaatay in sesamol ay si weyn hoos ugu dhigtay cabirka infarct, waxay miciin biday calaamadaha wadnaha, waxay xanibtay lipid peroxidation, neutrophil infiltration iyo sidoo kale waxay sare uqaaday heerka antioxidants. , iyo sidoo kale waxay xoojisay waxqabadka borotiinka anti-apoptotic Bcl-3.
[g]. Sesamol Xagjirnimo lacag la’aan ah oo xoqan
Xagjirnimada bilaashka ah waa atomyo aan xasillooneyn oo si fudud uga hela elektaroonno atamka kale. Labadooduba waa kuwo faa'iido leh oo sun ah iyadoo kuxiran feejignaantooda. Heerarka hoose ee xag-jiriyeyaasha bilaashka ah waxay door ka ciyaaraan jawaabta difaaca, si kastaba ha noqotee, markay diiradoodu aad u sarreyso waxay noqdaan kuwo waxyeello leh. Xagjirnimada bilaashka ah waxay yeeshaan murugada oksidheer ee dhaawici kara unugyada waxayna sababi karaan inta badan xanuunada dabadheeraada iyo kansarka sida kansarka, cudurada wadnaha, iyo arthritis, cataract, iyo cudurada neurodegenerative.
Jidhkeenu wuxuu ka hortagayaa saameynta cadaadiska oksidheer isagoo soo saaraya antioxidant si kastaba ha noqotee ma noqon karaan kuwo ku filan oo u baahan kaabis xagga cuntada ama kaabis ah.
Sesamol waxay leedahay 'awood ay ku joojiso sameynta xagjirnimo lacag la’aan ah iyo sidoo kale inay cabiriso xagjirnimada xorta ah.
Daraasad ku lug leh unugyada qaangaarka ah ee maqaarka bini-aadamka ee loo yaqaan 'HDFa' ee loo yaqaan 'UVB', oo loo yaqaan 'sbamol pretreatment' ayaa lagu qiimeeyay cytotoxicity, heerarka oksijiin ee ka hortagga jirka (ROS), lipid peroxidation, xaaladda antioxidant, iyo waxyeelada DNA-ga oksida. Sesamol waxaa lagu ogaadey inuu si weyn u yareeyo lipid peroxidation, cytotoxicity, ROS intracellular, iyo waxyeelada DNA ee oksida ee unugyada maqaarka bini-aadamka. Tan waxaa loo aaneeyay kartida sesamol dheeri si loo nadiifiyo ROS.
Isla daraasaddan ayaa lagu soo warramey inay kordhisay waxqabadka enzymatic iyo non-enzymatic taasoo gacan ka geysaneysa waxqabadka wanaagsan ee antioxidant.
[h]. Waxay yareysaa kolestaroolka dhiigga
Kalastaroolka dhiiggu waa shay dufan u eg, shay wejigaaga ku jira. Jidhku wuu ubaahan yahay si loo dhiso unugyo caafimaad qaba laakiin qaddarka saxda ah. Kalastaroolka waxaa lagu qaadaa laba nooc oo ah lipoproteins, cufnaanta hoose, iyo cufnaanta sare. Waxay markaa keenaysaa laba nooc oo kolestarool ah, kolestaroolka-cufnaanta hooseysa (LDL), iyo kolestaroolka-cufnaanta sare leh (HDL).
LDL badanaa waxaa loo yaqaan kolestaroolka xun tan iyo heerarka sare ee LDL Kordhi halistaada cillad wadnaha halbowlaha iyo cuduro kale.
Sesamol waxay yareyn kartaa heerka kalastarolka iyo sidoo kale heerka triacylglycerol ee jirka.
Imtixaanka dulqaadka dufanka, sisamol (100 iyo 200 mg / kg) waxaa lagu ogaaday inay si weyn (P <0.05) u yareyneyso nuugista triacylglycerol sidaa awgeedna ay hoos u dhigeyso heerka triacylglycerol ee jirka. Triacylglycerol waa qaybta ugu weyn ee dufanka ku keydsan unugyada adipose.
Daraasad ku saabsan jiirka Swiss albino oo leh hyperlipidemia, sesamol oo lagu daro 50 iyo 100 mg / kg ayaa lagu soo warramey inuu yareynayo heerarka kalastarol iyo triacylglycerol labadaba.
Firfircoonida sesamol ee yareysa kalastarolka iyo heerarka triacylglycerol waxaa loo aaneeyaa awooddeeda yareynta nuugista iyo sidoo kale kordhinta saxarada kolestaroolka.
[i]. Sesamol waxay waxtar u leedahay maqaarka
Maqaarka bini-aadamku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka isku-dhafan ee hawsheeda ugu horreysa ay tahay inay siiso difaac xubnaha jirka.
Sesamol waxay maqaarka uga faa’iideysaa siyaabo kala duwan sababo la xiriira awooddeeda oo ay ku jiraan antioxidant, iyo waxqabadka anti-bararka. Sesamol waxay maqaarka uga faa’iideysaa
· Ka ilaalinta maqaarka falaadhaha ultraviolet (UV)
Soo-gaadhista dheer ee iftiinka qoraxda waxay u horseedi kartaa jiil aan caadi ahayn oo noocyo oksijiin ah oo falcelin leh (ROS), taas oo sababi karta dhaawac maqaarka ah sida hoos u dhaca ku yimaadda maqaarka maqaarka iyo hyperplasia ee epidermis.
Sesamol waxay awood u leedahay inay xoqdo xagjirnimada bilaashka ah ee dhacaya sababtoo ah soo-gaadhista dheer ee qorraxda sidaas awgeed waxay maqaarka uga ilaalineysaa waxyeelada shucaaca DNA. Waxay bixisaa daahan ilaaliya kaas oo ka caawiya ka hortagga maqaarka in ay waxyeeleeyaan fallaaraha UV.
Daraasadaha ayaa soo sheegay in sesamol ay yareyn karto cytotoxicity-ka uu sababo UVB. Waxaa sidoo kale lagu soo warramey inay xakameyso melanin biosynthesis iyadoo hoos loo dhigayo muujinta tyrosinase, MITF, TRP-1, TRP-2, iyo MC1R ee unugyada melan-a.
Daraasad kale ayaa lagu ogaaday in sesamol ay sidoo kale caqabad ku noqon karto isku-darka melanin-ka iyadoo saameyn ku yeelanaysa cAMP / protein kinase A (cAMP / PKA), protein kinase B (AKT) / glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3β) / CREB, TRP-1, iyo MITF ee B16F10 unugyada
· Caawi inuu ilaaliyo maqaarka dhalaalaya
Sesamol waxaa loo yaqaanaa inuu yahay antioxidant xoog leh. Wuxuu si qoto dheer ugu sii fidayaa maqaarka sidaa darteed wuxuu nafaqeynayaa maqaarka. Tanina waxay caawisaa helitaanka maqaarka dhalaalaya.
· Waxay baabiisaa finanka
Furuq-baxa waa xaalad ay daloolada maqaarku ku xiran yihiin saliid, wasakh, iyo qaar ka mid ah noolaha waxyeelada leh.
Sesamol waxay leedahay waxyaabo bakteeriyada ka hortaga oo awood u siinaya inay ka takhalusto noolaha si aad maqaarka uga hesho finanka finanka.
· Waxay bixisaa saameyn anti-gabowga
Gabowgu waa geedi socod nololeed dhexdhexaad ah oo joogto ah. Si kastaba ha noqotee gabow dhicis ah ayaa dhici kara sababo dhowr ah sida soo-gaadhista dheer ee shucaaca UV, diiqadda oksidheerka iyo kuwa kale.
Sesamol waxay bixisaa firfircoonaan antioxidant firfircoon oo ka hortageysa maqaarka iyo jirkaba qayilo gacmeed iyo sidoo kale wanaajinta maqaarka.
Sesamol ayaa sidoo kale lagu soo warramey si looga hortago dhacdooyinka khadadka, daloolada, iyo laalaabkii.
[j]. Waxtarka Sesamol ee timaha
Mashiinka la mariyo ee saliidda sisinta ayaa nafaqeysa madaxa, timaha timaha, iyo fallaadhaha. Tani waxay kor u qaadaysaa koritaanka timaha caafimaadka qaba. Waxay sidoo kale gacan ka geysataa bogsiinta madax kasta oo waxyeello soo gaadhay kimikal inta lagu jiro daweynta timaha ama dheehidda.
Xilliga hore ee cirridka timaha waxaa laga yaabaa inay dhacdo sababtoo ah awoodda jidhka oo yaraatay si ay u sameyso melanin ku filan, iyo sidoo kale arrimo kale sida diiqadda oksidheerka, hab-nololeedka wax ka beddelka hidda-wadaha oo ay ku jiraan cuntada iyo sidoo kale isticmaalka daroogada
Kaabista Sesamol waxay caddeysay inay awood u yeelan karto inay ilaaliso midabka timaha iyo sidoo kale inay madoobaato timaha hore u cawlanaa.
Ka sokow, sesamol waxay kaa caawin kartaa baabi'inta qolofta. Cudurka 'Dandruff' waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco maqaarka qalalan, falcelinta xasaasiyadda ee alaabada timaha, iyo koritaanka fangaska ee madaxa ku dhaca iyo arrimo kale. Sesamol waxay ka caawisaa nafaqeynta maqaarka sidaas awgeed waxay ilaalinaysaa madax caafimaad oo caafimaad leh sidaa darteed waxay ka hortageysaa dhacda qolofta. Waxqabadka bakteeriyada ayaa sidoo kale hubisa in madaxu ka madax banaan yahay shey-baareyaasha sababa dandruff.
Saddex hab oo loo yaqaan 'sesamole'
①. Soo saarida saliida sisinta
Sesamol Isku-darka saliidda sisinta ayaa ugu fudud saddexda hab. Si kastaba ha noqotee, waa qaali. Marka habkani ma ahan mid ku habboon wax soo saarka warshadaha, gaar ahaan qiimaha wax soo saarka oo sarreeya.
②. Isku-darka 'synthetic synthetic' oo ka soo jeeda piperamine
In kasta oo ay cadaalad ahaan dhaqaale ahaan u tahay soosaaridda weyn ee Sesamol, dhammaan waddada isku-darka sesamol ee ka yimaadda piperamine waxay quseysaa wax soo saar yar marka la adeegsado habraaca hydrolysis. Xaaladda noocaas ah, sameynta midabaynta natiijada isku-dhafka iyo fal-celinta dhinaca ayaa lagama maarmaan ah.
③. Wadada Semi-synthetic ee ka timid jasmonaldehyde
Wadada loo yaqaan 'Semi-synthetic way' oo ka socota jasmonaldehyde waa habka sisinta ugu badan ee loo isticmaalo sisinta 'phenol synthesis process' illaa ujeeddooyinka warshadaha laga hadlayo. Hawshu waxay ku lug leedahay oksidation iyo hydrolysis sababtaas awgeed, natiijada sistemka sistemka ka soo baxa ayaa leh tayo sare iyo midab weyn.
Nidaamku wuxuu adeegsadaa oksaydh qaali ah iyo tikniyoolajiyad soo saarid falcelin leh, taasoo awood u siinaysa kala-goynta degdegga ah ee badeecada aagga soo saarista. Tani waxay yareynaysaa suurtagalnimada in fal-celinta kooxdu dhacdo. Layaab malahan badeecada ugu dambeysa (crystal-like white) oo tayo sare leh xaga midabka iyo sisamol cufnaanta.
Halkee u iibso sesamol
Budada Sesamol waxaa laga heli karaa khadka tooska ah oo ka duwan soosaarayaasha sesamol. Inta badan isticmaalayaasha sisamku waxay ka iibsadaan waxyaabo kala duwan websites, qaar ujeeddooyin tafaariiq ama jumlo ah.
Xaqiiji sharci ahaanshaha mid kasta soosaaraha sesamol adoo adeegsanaya sharciyada gobolka ee qeexan kahor iibsiga.
Joo Yeon Kim, Dong Seong Choi iyo Mun Yhung Jung “Waxqabadka Antiphoto-oxidative ee Sesamol ee Methylene Blue- iyo Chlorophyll-Sensitized Photo-oxidation of Oil” J. Agric. Chem Cuntada., 51 (11), 3460 -3465, 2003.
Kumar, Nitesh & Mudgal, Jayesh & Parihar, Vipan & Nayak, Pawan & Nampurath, Gopalan Kutty & Rao, Chamallamudi. (2013). Daaweynta Sesamol Waxay Yareysaa Heerarka Plasma Kalastarol iyo Heerarka Triacylglycerol ee Qaababka Mouse ee Xanuunka daran iyo daba-dheer Hyperlipidemia. Dufanka 48. 633-638. 10.1007 / s11745-013-3778-2.
Majdalawieh, AF, & Mansour, ZR (2019). Sesamol, oo ah lignan weyn oo ku jirta abuur sisinta (Sesamum indicum): Guryaha la-dagaallanka kansarka iyo qaababka ficil. Joornaalka Yurub ee Daawada Farmashiyaha, 855, 75-89.DOI: 10.1016 / j.ejphar.2019.05.008.
Ohsawa, Toshiko. "Sesamol iyo sesamol sida antioxidants." Warshadaha Cuntada Cusub (1991), 33 (6), 1-5.
Sesamol Archived 2010-01-14 oo ku yaal 'Wayback Machine' oo ku taal Chemicalland21.com
Wynn, James P.; Kendrick, Andrew; Xaqiijinta, Colin. "Sesamol oo ah kahortaga koritaanka iyo dheef-shiid kiimikaadka Mucor circinelloides iyada oo loo marayo ficilkeeda ku saabsan enzyme malic." Buruqyo (1997), 32 (6), 605-610.